SomaliTech.com Somali Irrigation Somalitalk.com Somali Weyn Somaliwide.net Safaritravels Somaliantv SomaliUK.com The Ogaden Road Wabishabeele Wardher Online Waqooyibari.com Waayaha Ethiopia oo dib ugu noqotay qarnigii 17aad (Zemene Masafint-gii)
By Hassan Moálim 23/11/2012
Markay dunidu maqasho magaca Ethiopia waxaa lasoo xasuustaa ama ay lamacno (synonym) tahay , gaajo, abaaro, saboolnimo, cuduro & meel hadd & jeer eey dagaalo ka ooganyihiin.
Haddaba qormadan waxaan ku eegi doonaa isbadelka kataagan Ethiopia ama ha,ahaato dhinaca dhaqanka, dhaqaalaha & loolanka siyaasadeed ee kadhex aloosan kooxda EPRDF kadib geeridii Kaligii Taliye Meles Zenawi.
Xukuumadaha kaligood taliyeyaasha ah shaqsigu doorka uu kaciyaro oo kaliya lama eego ee waxaa adkaanaysa in la kala saaro ururkii ama nidaamkii dawliga ahaa iyo shaqsigii kaligii taliyaha ahaa ileen isaga ayaa wax walba go’aamiyee. Marka uu shaqsiigaasu geeriyoodo ama uu booska ka baxana waxaan isla markiiba arkaynaa ururkii ama nidaamkii oo meesha ka siibaxaya, taas ayaa maanta Ethiopia ka taagan. Iyadoo aynu wada oganahay sida shuucubta Ethiopia loogu khasbay ineey u oyaan kii xasuuqay ee dadkooda laa’yay ee cuno qabtaynta saaray ayaa ilaa maanta oo 3 bilood laga joogo wali sawiradiisii eey meel walba ka muuqdaan ama ha noqoto goobaha la isugu yimaado ama dharka uu shaqsigu xidho.
Taariikhda Ethiopia marka dib loo eego horay ooma dhicin in si nabadgalyo ah oo aan dhiig ku daadanin xukun loola kala wareego. Tana maadaama isbadel wayn uusan dhicin oo uu wali sii talinayo xisbigii talada gacanta ku hayay oo ah TPLF lama filayo in eey isbadel siyaasadeed la yimaadan lagamana filayo ineey wax kabadelaan 21 sano nidaamkeey wadanka kusoo xukumayeen oo ah qaybi oo xukun (Divide and Rule) & cadaadis awood sheegasho (oppression). Waxaa aad u adag in ummada cadaadis ( oppression) & aragagixin (terrorize) lagu xukumo iyadoo loo adeegsanayo (illegitimitet institutions) haddii dad saas lagu xukumi lahaa waxay u suurto galilahayd Kaligood taliyeyaashii aduunka soomaray oon dhamaanteen wada garanayno ha oogu danbeeyo Xusni Mubaark gii Masal.
Hailemariam Desalegn (H.M) oo madaxtinimadiisa inbadan muran kataagnaa ayaa waxaa soo dhexgalay wadamada reer galbeedka oo kulataliyay ururka TPLF haddaan xilka lagu wareejinin H.M ineey Ethiopia burbur qarka u saarantahay sidaas darteed in uu xilka Ra’iisul Wasaaranimada Ethiopia lawareego ayaa oogu danbayntii la isku raacay kadibna baarlamaanka Ethiopia ayaa lagu hor dhaariyay. Wadamada reer galbeedka hadda sidii hore kuma ah arrimaha Ethiopia ee waxay ka baqanayaa ineey sidii Soomaliya oo kale eey kadhacdo Ethiopia isla markaana eey dhibaatadu guryahooda oogu timaado.
Markii la dhaariyay kadib khudbadii uu jeediyay H.M waxaa laga afgartay oo kaliya in uu mari doono wadadii uu hayay Kaligii Taliye Meles Zenawi isagoo ku tilmaamay in uu ahaa hogaamiye wayn wuxuuna arrintaas ku celceliyay dhawr jeer sidaas darteed wax is badel ah oo laga filayo majirto.
Iska daa in uu isbadel siyaasi ah oo wadanka xasilooni & daganaasho u keena la yimaado ee wuxuu wali ku guulaysan waayay in uu dhiso golihii wasiirada (Cabinet Minsters) iyadoo laga joogo mudo ka badan laba bilood intii la siiyay inuu kusoo dhiso dawladiisa.
Arrintan golaha wasiirada Ethiopia een wali ladhisan waxay muujinaysaa kala qaybsanaanta ama (power struggler) ka dhextaagan EPRDF-ta gaar ahaan ururka ugu awooda badan ee TPLF.
Kala qaybsanaantan ururka talada Ethiopia gacanta kuhaya ee EPRDF ayaa meel aad u saraysa gaadhay, tusaale ahaan hadaan usoo qaadano ururka OPDO oo ah ururka Oromada ee katirsan isbahaysiga EPRDF ayaan habayaraatee wax mansib sare ah la siinin markii la magacabayay Ra’iisul Wasaare H.M oo ka tirsan ururka Southern Ethiopian People's Democratic Movement (SEPDM) & Damake Mokonin Hassan oo ka soo jeeda ururka Axmaarda ee Amhara National Democratic Movement (ANDM), halkaas oo uu Ururka OPDO oo isku tirinayay inuu kasoo jeedo qowmiyada oogu badan qowmiyadaha Ethiopia ay arrintaas aad ooga cadhoodeen ooynan xataa 180 xubnood ooy Baarlamaanka Ethiopia eey ku leeyihiin ayaan in kabadan 50% kasoo qaybgalin xafladii lagu dhaarinayay H.M.
Golaha wasiirada ee Ethiopia waxay ka koobnaan jireen sida hoos ku qoran inkasa ooy magac uyaal aan awood lahayn ahaayeen , waxayna warbixinta report-ga siiyaan xubno katirsan gudiga fulinta ee ururka TPLF.
Qomiyada Tirda wasiirada
Oromada5 Shuucbta Koonfurta Ethiopia 5
Markii la ogaaday in aynan kasoo qaybgalin xafladii dhaarta Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa lagusoo eedeeyay ineey u shaqaynayaan ururka hubaysan ee la dagaalama Ethiopia ee la yidhaahdo OLF. Arintaas oo keentay in shir dag dag ah la isugu yeedho ururka OPDO oo xubno ka socda ururka TPLF inteey soo dhex fadhiistaan eey Qiimayn (Gimgamaa) ku sameeyaan xubnihii oogu sareeyay qaar xabsiga loo taxaabay qaarna jagooyinkii eey hayeen laga qaaday sida Wasiirkii Adeega Bulshada Junden Sado isla markaana xaaskiisii xabsiga loo taxaabay, meesha qaar kalena digniin lasiiyay.
Waxaa kale oo intaas dheer in mudo 3 bilood kabadan lagu guul daraysatay in la dooroto madaxwaynaha golbolka Oromada oo uu buuq badani ka taagantahay.
Dhinaca kale waxaa buuq badani ka taaganyahay gacan ku haynta H.M ama cidii uu amarka kaqaadan lahaa oo ileen waynu wada ognahay waxaa meesha ka taliya waa qowmiyada Tigreega ama ururka TPLF oo tiro ahaan lagu qiiyaaso ineey gaadhayaan 5% dadka Ethiopia oo dhan ilaa 90 Million. Waxaa intaas dheer wax awood ah oo gacanta H.M oogu jiraa majirto.
Wuxuu ururka TPLF u kalajabay markii hore dhawr koxood oo siyaasiyiin ah haddana inteey kala qaybsanaantii eey dhaaftay siyaasiyiintii ayay waxay gaadhay ilaa heer eey kala qaybsamaan saraakiisha sare ee ciidama Ethiopia, waxaanan tusaale inoogu filana in dhawaan la eryay taliyihii ciimada cirka ee Ethiopia Gereral Mola oo taliye ka ahaan jiray ciimada magaalda Qabridahar jooga.
Inkastoo eey aad u kala qaybsanyihiin haddana awoodii dalka oo dhan iyagaa gacanta kuhaya sida ciidamada qalabka sida, Federal Policeka, nabadsugida (security apparats) & dhamaan ilaha dhaqaalaha ( Economy & Financial sectors ) ee wadanka.
Waxaa badatay goosashada laga goosanayo dawlada Ethiopia waxaa dhawaan ka goostay madax sare oo ka tirsanaan jirtay ururka TPLF. Waxaa kamid ahaa Atakliti Hagos oo ka tirsanaa madaxda sare ee TPLF oo iska dhiibay wadanka Canada & Getachew Belay oo ahaa ku xigeenka ururka horumarinta gobolka Tigreega ooy madax katahay haweenaydii Meles Zenawi, ururkaas ooy hoos yimaadaan in ka badan 300 oo shirkadood ayaa isna wuxuu magan galiyo siyaasadeed ka dalbaday wadanka Marykanka , intaas waxaa dheer inuu dhawaan iska casilay dhamaan xilakii uu u hayay ururka TPLF Ambassador Tawolde Agaame oo ahaa xubin golaha dhexe ah isla markaana nin aad looga danbeeyo ahaa. Waxaa kale oo isna goostay gudoomiyhii ururka dhalinyarad ee TPLF. Waxaa kale oo badatahay goosashada askarta Booliska federalka ah iyo ciimadaba militariga.
Si loo xaliyo xurgufta u dhxaysa mdaxda ururka TPLF oo ay bishan November 16-18 ayaa shir wayne aan la shaacinin ay ku qabdaseen magaalo madxada gobolka Tigrega ee Maqale, hakaas aan wali la sheegin waxa ka soo baxay & in ay heshiiyeen & in kale.
Waxaa kale oo jira ineey dagaalo aad u tiro badani gobolka Tigreega uu kawado ururka la yidhaahdo Ururka Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiga ee Shacabka Tigreega (Tigre Peoples Democratic Movnment). Ururkan wuxuu maalin dhawayd weeraray xabsi wayn oo kuyaala magaalda Adhigrat halkaas ooy ka siidayeen dad maxaabiis ah oo aad u tiro badan isla markaana eey ku dileen in ka badan 40 askari. Waxaa uu sheegay gudoomiyaha ururkan Mola Asagidom ineey dagaalo waawayn dawlada eey kulagaleen magaalooyinka Humara & Matama.
Kacdoonka Islaamka: Cadaadinta iyo xasuuqa laguhayo ummada muslimiinta ee xooga lagu haysto ayaa wuxuu muslimiinta Ethiopia kusoo rogay khilaaf uu kadhex abuuray maamulka majlis Al-aclaha iyo masaajida isagoo talada ka xayuubiyay dadkii maamulayay masaajida kuna wareejiyay Diin Cusub oo lasameeyay laguna magacaabo Al-Axbaash.
Muslimiinta Itoobiya oo arrintaas ka dhiidhiyay waxay bilaabeen mudahaaradyo waaweyn oo kadhacay Addis Ababa ooy ku diidanaayeen taliska TPLF. Mudaaharaadyadaas waxay keeneen in shacab badan oo muslimiin ah la laayo kuwo badana loo taxaabo xabsiyada. Waxaa sitoos ah loo weeraray culimadii diinta laga baran jiray iyo maamulladii masaajida oo idil. Walina waxaa sii kordhaya maalinba maalinta ka danbaysa kacdoonta islaamka Ethiopia. Qaybaha Ciidamada Ethiopia: Ciidamada Ethiopia waxay udhisanyihiin 5 qaybood , qaybta Waqooyi, qaybta Koonfureed, qaybta Bari iyo Galbeedka iyo taliska dhexe oo fadhigiisu yahay magaalo madaxa Ethiopia ee Addiss Ababa. Haddaba taliyaha ciidamada bariga (Ogadeniya) oo magaciisa la yidhaahdo General Abraha (quarter) ayaa ka tirasan raga ciimada oogu awooda badan , oo isagu qaybtiisi xidhay oo ah ninka masuulka ka ah xasuuqa ummada reer Ogadeniya , kaasoo ku taajiray dhiiga ummada Somalida Ogadeniya. Waxaan lawada soconaa ineey dawlada Ethiopia xilkii uu uhayay gumaysiga eey ka qaaday Cabdi iley, sidaas waxaa qoray joornaalka la yidhaahdo The Reporter oo afka dawlada kuhadla, intuusan u dhoofin wadanka Emirate-ka halkaasoo eey rabtay Ethiopia oo aad oogu fadeexadowday xasuuqa ka socda Oagdeniya ineey Ina Iley ku qaanbaxdo si eey eeda isaga dusha ooga saaraan.
Arrintaas waxaa sicad uhor istaagay Gerneral Abraha oo u arkay ineey danahiisii shaqsiyadeed lataabtay, waxaan wada oganahay oo kale in dhamaan qanddaraasyada (quantracts) Kililka oo dhan la siiyo Gerealka xaaskiisa iyo walaalkii.
Sii uu haddaba arrintan uu General Abraha uhor istaagay taageero oogu helo ina Ileyna ooga dhigo mid shacabka la xasuuqayo ineey taageersanyihiin ayaa shirkii waynaa ee dhaqan bi’iska ahaa loo soo abaabulay shirkaas ooy danihii eey ka lahayeen aysan u hirgalin ooy fashilmeen isla markaasna eey dadwaynuhu u arkeen riwaayad uu Ina Iley iyo General Abraha eey jilayeen.
Haddaba ururka TPLF ee talada dalka Ethiopia haya ayaa sidaan kor kusoo sheegnay aad u kala qaybsan oo qof waliba ku dadaalayaa sidii uu xukunkiisa u sii adkaysan lahaa isla markaana hanti badan uheli lahaa. Xaalada uu maanta ururka TPLF marayo inteey ummadihii kale oo dhan soo dhameeyeen ineey iyagu hadda khatar isku hayaan oo uu wadanka gacanta ka boxo. Dhinaca kale waxaa jirta maahmaah Danish ah oo tidhaahda *marka eey Bisadu maqantahay jiirku miiska dushiisa ayuu ku ciyaaraa* taas oo micneheedu ka dhiganyahay markii uu KT M.Z ka baxay meesha ayuu hadda qof waliba awoodiisii la soobaxay oo aagiisii xidhay. Waxaa jiri jirtay qarnigii 17 aad in nidaamka lagu maamuli jiray wadanka Ethiopia oo la odhan jiray Zemane Masafint oo ay ka dhigan boqortooyin aan isku xidhnayn oo mid waliba uu iskii gobol u maamulo, kadib qarnigii 19aa Minilikii 2aad ayaa xoog isugu keenay.
Dhaqaalaha: Qiimaha maciishad oo gaadhay heer aynan dadka caadiga ah goyn karin ( very high inflation) haddii la heloba iyo lacagta adag oo wadanka (hard currency) ku yaraatay ayaa waxaa usoo gurmaday wadamada reer galbadeeka USA, UK, Germany , IMF & World Bank, haddana waxba way katari wayday dhibaatadii jirtay lacagyowigii eey dunidu oogu deeqday, sababtuna waxaa weeye lacagowga lookeeno waxay gashaa jeebka shaqsiyaad (Individuals Pocket) katirsan ururka TPLF ama (corruption) oo aad u gaadhay meel sare.
Guud ahaan bal aan isha kuhayno loolanka siyasadeed ee ka dhex taagan ururka TPLF oo talada wadanka gacanta kuhaya taas oo saamayn wayn ku yeelan karta guud ahaan in isbadel wayn oo lataaban karo uu dhaco wadanka Ethiopia oo qarka usaaran inuu kala bur buro dagaal sokeeyana uu ka qarxo sidii Soomaaliya oo kale. Hassan Moálim